ISIBINI SEBRAVES STORM YASEBUSIKA UJONAS KWIIFOTO ZOKUZIBANDAKANYA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Isibini seBraves Storm yasebusika iJonas yeeFoto zokuzibandakanya zeBlizzard
Isibini seBraves Storm yasebusika iJonas yeeFoto zokuzibandakanya zeBlizzard
UFelicia Sam noDavid Nartey baba nesibindi somoya wasebusika uJonas ukuze enze iifoto zokuzibandakanya ngekhephu. Ityala: I-Dotun Ayodeji Photography
Ngu: Kelly Spears 01/24/2016 kwi-11: 51 AM
Sisiphi isiqhwithi, isibini esisandul 'ukutshata ukuba senze ntoni xa befumanisa ukuba ikhephu liyeza? Baqokelela, babiza umfoti wabo, kwaye bayokudlala kuyo, ewe!
UFelicia Sam kunye nomlingane wakhe uDavid Nartey babesazi ukuba ii-intshi ezingama-20 ukuya kuma-25 kulindeleke ukuba ziwe kwiindawo zaseBaltimore naseWashington DC ngoMgqibelo, ngokwe Iindaba ze-ABC . Kodwa esi sibini saphosa ulumkiso emoyeni, sishiya umsebenzi ngolwesiHlanu, nge-22 kaJanuwari, kwaye saqhuba ngaphezulu kweekhilomitha ezingama-25 saya eGreenbelt, eMaryland ukuya kwindawo yabo yokufota.
Nomfoti UDotun Ayodeji kungqineke kungaphaya kokuhamba ikhephu; ukwazile ukubamba ukudubula okuhle yeentaka zothando ezingoyikiyo kwaye wabelana ngazo Ingcaciso .
Esi sibini sitshatileyo, uFelicia Sam noDavid Nartey, babenoncumo olukhulu njengoko babebuza ngexesha lesiphango sasebusika uJonas. Ityala: I-Dotun Ayodeji Photography
Ndiyazi ukuba yayingumbono onesibindi, kodwa abathengi bam bayazi ukuba ndiyaluthanda olo hlobo lweefoto, u-Ayodeji uxelela i-Knot yeefoto zokuzibandakanya kwi-blizzard. UDavid ukhankanyile ukuba angathanda ukubona ihlumela lekhephu xa endibekisela umtshato wabo.
UFelicia Sam noDavid Nartey badlala kwikhephu ngexesha lokudubula kwabo. Ityala: I-Dotun Ayodeji Photography
UNartey, 31, uxelele u-Ayodeji ukuba alungele kuba umnxeba wokudutyulwa kwekhephu uza kuza ungalindelanga. Kwaye enkosi Ayodeji kunye ne-nor'easter, amaphupha amahlumela amafoto ebusika ebusika azaliseka.
UFelicia Sam noDavid Nartey bafuna ukuthatha iifoto zokuzibandakanya kwikhephu. Ityala: I-Dotun Ayodeji Photography
Umyeni oza kucetyiswa ukuba abe ngu-Sam, 27, ngo-Okthobha u-2015. Wawuphakamisa lo mbuzo nje phambi kweNkanyamba uJoaquin, ebonakala ifanelekile kwesi sibini sinesibindi.
Ke zeziphi iingcebiso i-Ayodeji enazo kwezinye izibini ezibandakanyekileyo eziphupha iifoto zokuzibandakanya kwi-blizzard? Ukhuseleko kuqala, uyasixelela. Cwangcisa kwangaphambili kwaye udubule kufutshane nalapho unokufumana khona indawo yokuhlala xa kukho isaqhwithi esibi. Ukuba neevili ezine kuyacetyiswa, kwaye ukunxiba iimpahla ezininzi kuyanceda.
Imikhosi yethu eshushu kakhulu ukuba kungekudala ibe nguMnu noNksk Nartey! Iifoto zakho zokuzibandakanya zihle, kodwa into isixelela ukuba i-adventure yakho sele iqalile.
amaxwebhu oza kuwatshintsha emva kokutshata
ishawa yomtshato ngokubanzi ndiyabulela amagama
Iseti yomtshato wesithathu imlungiselela kunye naye
izipho zootata ngosuku lomtshato
Ixabisa malini amaqebengwana omtshato?
isuti enxibe iimpahla ezimnandi zokunxiba emtshatweni